In ku dhow 100 Xildhibaano oo ka digay in Golaha Wasiirada cusub lagu soo daro afarta xubnood ee laga digay |
In ku dhow 100 Xildhibaano oo ka digay in Golaha Wasiirada cusub lagu soo daro afarta xubnood ee laga digay
In ku dhow 100 Xildhibaano oo gelinkii dambe ee maanta kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho, ayaa waxay ka horyimaadeen in Golaha Wasiirada lagu soo daro, afartii xubnood ee horey looga digay in lagu soo daro.
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federalka Somaliya Dr. Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa waxay u bandhigeen in Golaha Wasiirada uu ka soo xusho aqoonyahanada Somaliyeed, ee aan shaqada iyo shuqulka ku lahayn Madaxtooyada Magaalada Muqdisho. order cardura online cheap, generic zithromax.
“Ra’iisal Wasaaraha markii la magacaabay codka si sharaf leh ayay ku sii siiyeen Xildhibaanada, waxaana Ra’iisal Wasaaraha looga digay in uu ku soo daro afar nin oo laga digay, markii uu ku soo darayna waad aragteen Xildhibaanada way diideen.” Ayuu yiri Xildhibaan C/laahi Cumar Abshirow.
“Ra’iisal Wasaaraha waxaan kaga digeynaa in uu markale uu Golaha Wasiirada ku soo daro afartaasi nin, haddii uu ku soo daro waxaa dhici doonto in ay diidaan Xildhibaanada Baarlamaanka Federalka Somaliya.” Sidaasi waxaa yiri Xildhibaan Abshirow oo kulankaasi ka dib la hadlay Warbaahinta.
Xildhibaan Bishaar Ugaas Ibraahim, ayaa wuxuu Ra’iisal Wasaaraha uu ugu baaqay in Golaha Wasiirada uu ka soo xusho aqoonyahanada Somaliyeed, ee ay ka go’an tahay in dalka iyo dadka Somaliyeedba ay wax u qabtaan.
“Waxaan rabaa inaan Ra’iisal Wasaaraha ku adkeeyo in uu Golaha Wasiirada ka soo xusho aqoonyahanada Somaliyeed, ee aan siyaasadda ku jirin, isla-markaana ay ka go’an tahay inay wax u qabtaan dalka iyo dadkooda.” Ayuu yiri Xildhibaan Bishaar oo ka barbar hadlaayay Xildhibaan Abshirow.
Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa waxay intoodu badan ay si xoogan kaga horyimaadeen Golahii Wasiirada ee 12-kii bishaan looga dhawaaqay Magaalada Muqdisho, waxayna ka soo qaadeen kuwo waxba kama jiraan ah.